शिरमा इन्द्रकिल र हत्केलामा कुहिरो | samakalinsahitya.com
व्यक्तित्व / कृतित्व (121)
शिरमा इन्द्रकिल र हत्केलामा कुहिरो
- दीपक सुवेदी
नेपालको पूर्वीद्वार, भारतसँगको एउटा भौगोलिक सीमानाको आधार हामी मेची नदी तरेर पानीटंकी पुग्यौँ । पिजुमा सिक्किमसम्मको पूर्जी लिएर सिलिगुडीहुँदै हिमालयका हरिया पर्वत शृङ्खलाहरmका बीचमा रहेको कालोपत्रे नागबेलीहरmमा उफ्रिँदै र हल्ँिलदै टिस्टाको तिरै तिरै लाग्यौँ । टिस्टालाई देखाउँदै के.पी. सर भन्दै हुनुहुन्थ्यो– “यो टिस्टा नदी र तमोरको एउटै शिर कञ्चनजंघा हो ।” मैले पिजुको प्वालबाट हेरेँ, त्रिशुली र टिस्टाको पानीको हिँडाइ पनि सायद एउटै रहेछ । डाँडाको काखे बाटो, कहिले तेर्सिन्थ्यो । कहिले ओरालो जस्तो कहिले उक्लिएको जस्तो लाग्ने ।
२०७१ साउन २२ गते रमपो खोला तरेर हामी रमपो बजार स्थित चेक पोष्ट पुग्दा विहानको लगभग ९ः३० बजेको थियो । के.पी. सर सबैका परिचय–पत्र बोकेर चेक पोष्टतिर अघि अघि लाग्नु भयो । हामी पछि पछि लाग्यौँ । चेक पोष्टको प्राङ्गडमा उभिएर विन्दु सर यो कुन पहाड हो रु यसको नाम के हो रु यो चाहिँ रु भन्दै सोधिखोजी गर्न थाल्नु भयो । रमपोको पूर्वमा पाखिम, पश्चिममा तुरmङ, उत्तरमा टुका जित्लाङ र दक्षिण–पश्चिम अलि पर इन्द्रकिल पहाड, यी पहाडको बसाइ हेर्दा मलाई यस्तो लाग्यो– पहाडै पहाडले हातेमालो गरेर हामीलाई अहिले बाँधिरहेका छन् । पूर्व सिक्किम र पश्चिम वंगालको सीमानाको रmपमा रमपो रहेछ ।
रमपोबाट अमरजङ्ग हाइड्रो पावर, सिन्ताङ बजार, रानीखोला हुँदै बत्तीस माइल पूर्वउत्तरहुँदै मल्ली बजार, औषधी कारखानाबाट नौ माइल हुँदै हामी दिनको १२ः३० बजे गान्तोक बजार आइपुग्यौँ । आहा ! नगवेली साँघुरा कुइनेटा बाटाहरmकोे शहर । अनारका गुट्टी जस्तै गान्तोके घरहरm ।
शर्मा होटलमा खानाखाँदै मैले कविता दिदीलाई सम्पर्क गर्न थालेँ । अर्कातिर यात्राभरिको रमाइलो मान्छे नरपति सर पेम्पा लामालाई सम्पर्क गर्दै हुनुहुन्थ्यो । मैले मणिपुरका भवानी अधिकारीलाई पनि सम्पर्क गरेँ । यतिमात्र होइन सुरेन्द्र लिम्बु, भीम राई ‘परदेशी’, बुद्घि तेम्बे ‘माइला’, हङ्कङमा रहेका भयवादी देश सुब्वा र साब्लाबुङे राजकुमार राईलाई पनि सम्पर्क गरेँ । तर कसैसँग सम्पर्क हुनसकेन ।
हामी नेपाली साहित्य परिषद्बाट फर्किदा बेलुकाको सात बज्न लागेको थियो । सिमसिम पानी पर्दै थियो । पानीमा रmझ्दै हामी बसेको होटल मंगोमा सिक्किम विश्वविद्यालय नेपाली विभागका विभागीय प्रमुख डा. कविता लामा र उपप्राध्यापक देउकुमार सुब्वा आउनु भयो । यो परिचय विस्तारको अनौपचारिक अवसर पनि थियो । मेरो भने कविता दिदीसँग भयवाद अध्ययन प्रतिष्ठानको कामले गर्दा चार वर्ष अघिदेखि कै चिनारी थियो । सबै साथीहरmले आ–आफ्ना योजना र उद्देश्य सुनाउनु भयो । समसामयिक साहित्यका बारे धेरै छलफलहरm भए ।
सिक्किमबाट नेपाली साहित्यलाई उठाइरहेका सानु लामा (कथाकार), रmद्र पौडेल (समालोचक एवं उपन्यासकार), शान्ति क्षेत्री (नारीवादी), सुधायम राई र पुष्पा शर्मा (नारीवादी), चुन्निलाल घिमिरे (रङ्गकर्मी), थिरmप्रसाद नेपाल (हास्यब्यङ्ग्यकार), प्रविण राई ‘जुमेली’(कवि), ध्रुव लोहागुन (नाटककार), सानुभाइ शर्मा, प्रद्युम्नलाल श्रेष्ठ, राजेन्द्र भण्डारी, पेम्पा लामा आदिका विधागत योगदानका बारे कविता दिदीले जनकारी गराउनु भयो । मलाई यस्तो लाग्यो– ‘चिन्तनशील यहाँका स्रष्टाहरm साहित्यको विधागत चिन्तनमा पनि हामीभन्दा माथि रहेछन् र साहित्यसँग समाज, संस्कृति र राजनीतिको सम्बन्धका बारेमा पनि हामीभन्दा निकै सचेत रहेछन् । तर हामीमा त भाषा र भाकाप्रति मजाक गर्नेहरmले नै निराश हुनुपर्ने प्रशस्त ठाउँहरm बनाइदिएका रहेछन् ।’
सिक्किमको अर्को नाम इन्द्रकिल पर्वत रहेछ । यहाँको जनसंख्या सवा छ लाख, जसमा नेपालीहरm ६९ प्रतिशत रहेछन् । मिक्स कल्चरमा हुर्केको सिक्किम, यहीँबाट संवत् १८३८ तिर लेप्चाहरm नेपालको फिक्कलस्थित रम्फोकमा गएर बसोवास थालेका रहेछन् । सिक्किम र दार्जिलिङमा यिनीहरmको संख्या ठूलै रहेछ । नेपालमा भने लेप्चा लोपोन्मुख जाति आदिवासी समुदायमा पर्दछन् । बौद्घ धर्म मान्ने, प्रकृतिको पूजा गर्ने र कञ्चनजंघा हिमालप्रति अगाध आस्था राख्ने यिनीहरm नेपालमा भने राज्यको उपल्लो निकायमा पुग्न सकेका छैनन् । तर यता त सरकारी अड्डादेखि राजनीति, व्यापार, कला, संस्कृति र साहित्यमा पनि यिनीहरmको बाक्लो उपस्थिति रहेछ ।
साउन २३ गते, विहान ६ बजे, पानी सिमसिम परिरहेको थियो, हामीले गान्तोक शहरलाई छोड्दा । कतै कतै एकादुई मानिस फट्टफुट्ट आङ् तान्दै थिए । गान्तोक पूरै उठेकै थिएन । उठोस् पनि कसरी, बेलुका हामी एघार बजे सुत्दा पनि गान्तोक बजार तन्नेरी झैँ थियो । अब सायद, शहरी क्षेत्र सकिएछ । पिजुलाग्यो सिङ्टाङ्गबाट पश्चिम तर्फ उकालै उकालो ।
‘मेरो घडीले ल है ९ः५५ देखायो ।’ सान्दुप्चेमा पुग्दा विण्णु भन्दै हुनुहुन्थ्यो । यहाँ गौतमबुद्घको अवतार मानिने गुरm रिम्पुतेको शालिक चार करोड ३७ लाख ४४ हजार दुई रmपयाँको लगानीमा निर्माण सम्पन्न गरी दलाई लामाद्वारा सन् १९७३ मा उद्घाटन गरिएको रहेछ । नाम्चीका चार धाम (बद्रीनाथ, जगन्नाथ,रामेश्वर र द्वारिकानाथ) साँच्चै शोभनीय स्थल रहेछन् । हामी नाम्चीका यी धाममा रहँदा मैले मोबाइल हेरेँ, दिनको १०ः४५ भएको थियो ।
दार्जिलिङबाट ५५ किलोमिटर पश्चिम दक्षिणमा मिरिक पर्दोरहेछ । झापाली खेती, इलामे केटी, ताप्लेजुङको तोङ्बा र सुकुटी भन्ने लोकआहानमा रहेको इलाम र दार्जिलिङको सीमावर्ती सन्दकपुर ३६३६ मिटरको उच्चइमा पर्दोरहेछ रहेछ ।
एकताका सुधपा तीनै जना दार्जिलिङमा सरकारी स्कुलका शिक्षक रहेछन् । वि.स. १९८१ मा उनीहरmद्वारा नै उद्घाटन गरिएको भानुभक्त पाठशालाको छेउमानै रहेछ नेपाली साहित्य सम्मेलन । जहाँ नाटककार तथा कलाकार इन्दिरा ओझा ‘क्षेत्री’, गोपीचन्द्र प्रधान, डा. रmद्रराज मास्के, डा. सूर्य गिरी, धनहाङ् सुब्वा, डी.डी. गुरmङ, मेघमणी दाहाल, चन्द्रकुमार राई, चन्द्र शर्मासँगै हामी साँझ ५ः२० रह्यौँ ।
टाढा देखिने हिमालको सेतो फेटा, पहाडको हरियो भोटो पहिरिएर ठिङ्ग उभिएको सिक्किम सिरानमा रहेछ भने दार्जिलिङ पहाडको कम्मरमा रहेछ । घाम कलिलै थिए । हामी लेडेनला रोड हुँदै चौरस्तामा उक्लियौँ ।
प्रकृतिले आफ्नो सुन्दरतालाई जम्मा पारेर छप्लक्कै खन्याए जस्तो । जोनाथन वेटले आफ्नो कविता ‘द सङ अफ द अर्थ’ (धर्तीको गीत ) को अन्त्यमा– “पोएटी इज द प्लेस, होयर वी सेभ द अर्थ”(कविता नै त्यो ठाउँ हो, जहाँ हामी पृथ्वीलाई सुरक्षित राख्छौँ ।) यसै ठाउँलाई हेरेर लेखेका पो हुन् कि, जस्तो लाग्ने । कञ्चनजङ्घाको शीतल छहारी तल महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाको क्रीडाभूमि दार्जिलिङको चौरस्ता चोकैमा रम्घाको पाखामा उदाएका भानु भेटिए । आहा ! दौरा–सुरmवाल अनि बिर्खे टोपीमा ठाँटीएर रामायण बोकी कतै पाठका लागि निक्लेका बेला हामीलाई नै पर्खे जस्तो । गोर्खाल्यान्डका लागि न उठ्न न सुत्न नै सकेको पर्वतकी रानी दार्जीलिङको मुटुमा साहित्य कला संगमलाई लिएर विन्दु दाहाल, ओमप्रकाश गौतम, नरपति पाण्डे, विण्णु न्यौपाने, हेम अधिकारी, के.पी ढकाल र म २०७१ साउन २४ गते विहान ७ ः३० बजे उभिरहेका थियौँ ।
मानिसहरm ओहर–दोहर गरिरहेका थिए । एक हुल फागुन्डा फूलाइरहेका केटाकेटीहरmको पनि भिड थियो । केही विद्यार्थीहरm आ–आफ्ना विद्यालयका पोशाक लगाएर सायद स्कुल बसको पर्खाइमा थिए । मैले वरिपरि हेरेँ, बरबटे कमानको लङ्गडालाई । एकताका लैनसिंह बाङदेलले लेखेका थिए– “यहाँ स्कुल जान सामेल भएका केटाहरmले लङ्गडालाई विरक्त पार्थे ।” मैले यता उति हेरेँ तर आज कतै यहाँ भुइँ भालु थिएन ।
सबै ब्यस्त देखिन्थे । बाटाका छेउमा भएका फलैँचाहरmमा कोही ध्यानमा निमग्न थिए त कोही योगामा व्यस्त देखिन्थे । पसलहरm फाट्टफुट्ट खुल्दै थिए । भुइँबाट उठ्दै गरेको कुहिरोले विस्तारै हामीलाई छुँदै थियो । वरपरका धूपीका सिन्केपातबाट जल विन्दु चुहिरहेका थिए । अलि प....र धूपीका गाछीमा अलिकति घाम अडेस लागेजस्तै देखिन्थे ।
नेपाली साहित्यमा बौद्घिक चिन्तनको आँटिलो प्रवेश आयामेली आन्दोलन यहीँबाट उठेको थियो । सन् १९६३ मा इन्द्रबहादुर राई, बैरागी काइँला र ईश्वरबल्लभले नेपाली साहित्यमा विचार, शैली र भाषा पक्षमा परिवर्तन ल्याउन तेस्रो आयाम यहीँबाट उठाएका थिए । यो ठाउँ अहिले पनि त नेपाली साहित्य र स्रष्टाका लागि तीर्थस्थल नै भएको छ । चौरस्ताको मौलिक सुगन्ध र प्रकृतिको छटामाझ यसरी आफू उभिएर सम्झनाको दियो बाल्दा मात्रै पनि यहाँको सौन्दर्य समीकरण भई जीवनको यो क्षणमा अलौकिकताको अनुभूति भयो ।
दीपक जी, एक क्लिक । क्यामेरा मलाई दिँदै ओम सरले भन्नु भयो । भानुको सालिक छेउछाउमा केही तस्विरहरm लियौँ । यहाँ हामीले करिव पन्ध्र मिनेट बितायौँ । सबै साथीहरm मेल रोडतिर लाग्नु भयो । विन्दु सर र म पनि पछि पछि लाग्यौँ । साँच्चै लैनसिंह, हिमालका टाकुराहरmमा भने प्रथम किरण पर्नासाथ पर्वतराजले यहाँ रमाइलो सुनको मुकुट लाएजस्तो देखियो । बाटाघाटामा पनि एकाबिहानै हिँड्ने दूधवालाहरm काँधमा दूधको ढुङ्ग्रो लिएर घरघरमा गइरहेका जस्ता पनि देखिए ।
हामी मेल रोड ओरालै ओरालो लाग्यौँ । रोडको छेऊमा रहेको रोयल प्यालेस हुँदै बिहानको ८ः३० बज्दा हामी पश्चिम बंगालका राज्यपाल पद्मजा नाइडुको स्मृतिमा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीद्वारा सन् १९७५ नोबेम्वर २१ मा समर्पित जिओलोजिकल पार्कमा थियौँ । पार्ककै पछि रक गार्डेन तेन्जिङको समाधी स्थल । माथिबाट क्रमशः न्यूजिरल्यान्ड, बेलायत, नेपाल र भारतका अंकित राष्ट्रिय झण्डाहरm उठाएर सगरमाथा चढ्दै गरका तेन्जिङलाई देख्दा गर्वले मेरो छाती फूलेर आयो ।
सागरमाथा नेपालको पहिचान मात्रै नभएर विश्वकै शिर हो । यस शिरमा पहिलो पटक पुग्न सफल पहिलो आरोही तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र सर एडमन्ड हिलारी हिमाल इतिहासका अमर पात्र हुन् । तर यो गर्वले धेरै समय मेरो मथिङ्गलमा फक्रन पाएन ।
साँच्चै कुम्भराज, इतिहासमा लेखिए जस्तै दुःखको कुरा, हामीले गर्व गरेजस्तो नेपाल र नेपालीलाई खुसी बनाएका तेन्जिङले पछि भारतीय नागरिकता लिए । आफूलाई भारतीय भने । दोस्रो नेपाली आरोही नवाङ गोम्बु र आङकामी शेर्पा पनि तेन्जिङकै बाटो हिँडे । तर, सन् १९६५ मा भारतीय सेनाका एमएस कोहलीको नेतृत्वमा २१ आरोही सहित खुम्जुङ–१, सोलुखुम्बुका फू दोर्जी शेर्पा भने चौथो आरोहीका रmपमा पहिलो पटक नेपाली भएरै सागरमाथा चढे । भारतले उनलाई नागरिकता सहित सरकारी सुविधा दिने प्रलोभन दियो । म नेपाली नै भएर जन्मिएँ नेपाली नै भएर मर्छु भने । भारतको सबैभन्दा ठूलो खेल पुरस्कार अजुर्न पनि दियो । तर उनले नेपाली रहनुमै गर्व गरे । नेपाली भएरै मरे । तेन्जिङका नाममा त कवि तथा लोकगायक धर्मराज थापाले “हाम्रो तेन्जिङ शेर्पाले चढ्यो हिमाल चुचुरा, गम्केर बजाउ खैँजडी झम्केर नाच मुजुर.......” भनेर गीत नै गाए । तर फू दोर्जी शेर्पा, जसको इतिहास अलिखित छ । न त अहिलेसम्म उनको नाममा कुनै गीत नै गाइयो ।
“घर नेपाल हो, हजुर.... नेपाल तीन लम्बरमा जग्गा छ, जमिन छ, खानलाउन राम्रो पुगे नेपाल छोडेर किन मुगलान पस्नु पथ्र्यो ? आफू १६ वर्षको हुँदा दोरलिङ पसेको । तर दिनदशाले गर्दा पहाड फर्कन सकिनँ...।” यसरी आफूलाई मन परेको बेला सोध्ने मानिसलाई जीवनकहानी सुनाउने लङ्गडालाई एकताका लैनसिंह बाङ्देलले यहीँ भेटेका थिए ।
हामीले पनि यसरी नै आफ्नो जीवन कहानी सुनाउने झापा (चारआली) का रञ्जित गुरmङलाई लाई भेटायौँ । तर उनको जीवन कहानी लङ्गडाको जस्तो दुःखी हैन गर्भिलो छ । पिजु पार्ककै छेउमा घरजम र होटल गरि आफ्ना जीवनका पचास बसन्त बिताएका रञ्जितले शिरको ढाकाटोपी दुवै हातले मिलाउँदै भने– “डल्लै नेपालबाट आउनु भएको रहेछ । म पनि पन्ध्र वर्षको हुँदा यहाँ आएकोथ्यो । अहिले ओसी काटेँ ।”
सडकमुनि–माथि रञ्जितका जस्तै घर, पसल, होटल, रेस्टुराँ थिए । अहिले त जहाँ लङ्गडाभन्दा धेरै असल र धनी मानिसहरm रहेछन् । जहाँ ऐश्वर्यका निम्ति उनीहरmसित अनेक साधन पनि रहेछन् । यी मानिसहरmले लङ्गडाजस्तो घस्रीघस्री माग्नु पनि पर्दैनरहेछ ।	दार्जिलिङको यस बसाईमा मलाई यस्तो लाग्यो– ‘यहाँ त बौद्घिकतालाई आफ्नो स्वर्थपूर्तिको लाइसेन्स पनि बनाउँदा रहेनछन् । तर हामी त पाइला नै मेटेर उभिन चाहाँदारहेछौँ र बाटो नै भत्काइ रहँदारहेछौँ ।’ कुहिरो डम्म थियो । साउन २५ गते, दिनको ११ बजे पानी पनि परिनै रहेको थियो । रञ्जितकै होटलमा खाना खाएर हामी दार्जिलिङबाट ओरालै ओरालो, बतासे डाँडा, सुकिया पोखरी हुँदै सिमानै सिमाना फर्कियौँ, जहाँ कहिले कविता राजनीतिजस्तो बनिरहेको त कहिले राजनीति कविताजस्तो बन्न नसकेर चेप्टिरहेको देश ।
प्रकाशित मिति : प्रकाशन मिति : बिहीबार, 25 चैत्र, 2072
बुद्धल्यान्ड टु स्विजरल्यान्ड र यात्रास्पर्श अवधारण
भारतीय नेपाली महिला एकाङ्कीकार र उषाकिरणको मुक्तिबोध
भारतीय नेपाली साहित्यको विश्लेषणात्मक इतिहास
चित्रगुप्तको गुप्तचित्र : समसामयीक बिब्ल्याँटाप्रति व्यङ्ग्य
यात्राविरत ट्राभल एकाउन्ट ‘युरेसियाको स्पर्श’
सिंघकको रेमिटल्यान्ड भर्सेज प्रेमल्याण्ड
कवितामा सुदूर गाउँका कथा
भारतीय नेपाली बाल एकाङ्की र मुक्तिको रहर
बिम्बका पहाड र बौद्धिक चेतनाका कविता
अपमानमा जातियतावादी दृष्टिकोण
सूर्य हराउने गर्छ
वर्तमानका संवेदना तरङ्गित कविता
दार्जिलिङ कमेण्ट्रीमा चार विद्या चौध चतुर्याइँ
वि.पी.को लेखन र यौनमनोविश्लेषण
वर्तमान समयको त्रासदी बोकेका कविता